Miorina afovoany ny orana ao amin'ny "Hongkong" an'i Ling Famoronana an-tserasera
Andro vitsy lasa izay ny orana no mpiorina voalohany tamin'ity volana aprily ity izay io teny malaza io dia niaraka tamintsika foana fa mieritreritra aho fa tsy tokony hanao kopia akory. Amin'ny orana ihany koa aho no nitady ireo mpanao hosodoko sasany izay nanandrana naneho ny tontolo mando sy manokana miaraka amin'ireo fofona omen'ny tany na ny asfalta amin'ny tanàna iray.
Kohn, Djukaric ary Imre Toth Nandeha namakivaky ireto andalana ireto izy ireo mba hampisehoana amintsika ny kanton'izy ireo amin'ny fampitana io orana latsaka tsy mitsahatra amin'ny volo io. Wang Ling koa sahy mitondra ny orana amin'ilay ampahany niomerika nantsoiny hoe "Hongkong" ary mitondra antsika hiverina any amin'izany tanàna izany miaraka amin'ireo volondavenona manjaka indrindra novaina ho mpandray anjara fototra.
Sary hosodoko nomerika an'i Ling manana famaranana lehibe ary amin'ny tsipika voafaritra tsara dia ahafahantsika miditra ao amin'ny atmosfera manokana izay noforonina tao amin'ny tanàna toa an'i Hong Kong sy ireo toetra mampiavaka azy ankehitriny ao amin'ireo trano ireo sy ilay panorama an-tanàn-dehibe.
I Ling mihitsy no zarao ny fomba fiasa amin'ny nomerika avy amin'ny YouTube. Afaka manakaiky kokoa ny fantsony ianao avy eto.
Tsy hampitaha izahay ireo ora fandinihana mety ilainao ireo sanganasa mahazatra indrindra amin'ireo nomerika. Ny maha samy hafa an'ity farany dia ny fanananao "Control + Z" foana hamongorana ny fikorohana na ny lokon'ny loko farany. Na dia mety maharitra 1000 ora aza ny fanatanterahana fifehezana amin'ny pensilihazo na loko rano, raha manaraka ny fampianarana hita ao amin'ny YouTube ny olona iray, miaraka amin'ny ezaka sy fanoloran-tena, dia afaka mahita valiny mendrika izany.
Noho io antony io, ny asan'i Ling dia manampy antsika hampiseho ny fomba hisafidianana ny borosy sy ny endrika mety alao tahaka ny famaranana ny asa menaka amin'ny canvas. Ny nomerika, na izany na tsy izany, amin'ny tanana mahay dia hanana famaranana mahafinaritra foana toy ny amin'ity tranga ity miaraka amin'i Ling.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Orana ao amin'ny sary hosodoko 'Hongkong' an'i Wang Ling